ISO ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လို Burn မလဲ၊ ဘယ်လို Mount မလဲ၊?? ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ » ISO ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လို Burn မလဲ၊ ဘယ်လို Mount မလဲ၊??
By သန့်ဇင်ဌေ3း:48 AM15 comments
teereh min December 20, 2011 at 4:12 AM
အခုလိုတင်ပေးတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..တော်တော်လေးလဲရှင်းသွားတယ် iso ဆိုတာဘာလဲပေါ..အားပေးလျှက်ပါ.။အရမ်းဆုံတယ် ဒီကမိတ်ဆွေဆိုက်..လိုချင်တာအကုန်လုံးနီးပါးရပါတယ်။ အမြဲတင်ပေးသွား နိုင်ပါစေ.။
swannyee December 20, 2011 at 4:25 AM
သန်းအေး December 20, 2011 at 7:49 AM
ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အချိန်မရွေး ၀င်နှိက်လို့ရနေတဲံ့ ရွှေတိုက်ကြီး ပါပဲဗျာ..ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေဗျာ..
သန်းအေး December 20, 2011 at 7:50 AM
phone win December 21, 2011 at 11:20 PM
ISO အကြောင်း သေသေချာချာသိချင်နေတာ--
evergreen December 22, 2011 at 10:04 AM
nero software နဲ့ run တာလေးလည်း တင်ပေးရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်.
heinartlover February 15, 2012 at 10:52 PM
ဒီနေရာလေးဟာ ရွှေဥလေးမှန်မှန် အုတဲ့နေရာပါလား...၊နောက်ဆိုအမြဲရောက်ဖြစ်တော့မှာသေချာတယ်။
ကျေးဇူးပါ ဆရာ၊ လေးစားရိုသေမှုဖြင့်...။့
akswar February 23, 2012 at 9:00 AM
အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ၊ အရင်က ISO ဆိုတာ သေချာမသိဘူး
ခုလိုရှင်းပြလိုက်မှ စိတ်ထဲ အတော်ကျေနပ်သွား။
ကျေးဇူးပါ ကိုနေမင်းမောင်၊ အမြဲပျော်ရွင်နိုင်ပါစေ...။
lional March 14, 2012 at 12:47 PM
စစ်ငြိမ်းလူ April 21, 2012 at 12:04 AM
softwear ပြန်တင်ပေးပါလား ဆွဲလိုကမရလို့ပါ လေးစားစွာဖြင့်
mone tine October 13, 2012 at 10:09 AM
Anonymous January 11, 2014 at 10:11 PM